प्रेम आलेको आक्रोश–रक्सी खान जाउँ भन्ने ‘साँढे’बाट पर्यटन बोर्ड चल्दैन ! - jagritikhabar.com
प्रेम आलेको आक्रोश–रक्सी खान जाउँ भन्ने ‘साँढे’बाट पर्यटन बोर्ड चल्दैन !
प्रेम आलेको आक्रोश–रक्सी खान जाउँ भन्ने ‘साँढे’बाट पर्यटन बोर्ड चल्दैन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले हाल छानबिनका क्रममा रहेका पर्यटन बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीमाथि खनिएका छन् । उनले रेग्मीले टोयोटाका गाडी बेचेर आफ्नो इमान किन्न खोजेको आरोप लगाउँदै आक्रोश व्यक्त गरे ।
मन्त्री आलेले सीईओ रेग्मीकै कारण बेलायतमा भएको विश्व पर्यटन मेलामा नेपालको बेइज्जत भएको भन्दै रक्सीको मातमा उन्मत्त भएका मानिसलाई संस्थाको सीईओ बनाउँदा संस्था चल्न नसक्ने बताए । उनले सीईओ रेग्मीलाई साँढेको संज्ञा दिँदै आफ्नो इमान किन्ने कुरा सपनामा पनि नसोच्न चेतावनी दिए ।
मन्त्री आलेले भने, ‘अब यहाँ साँढेहरुलाई ल्याएर राजनीतिक नियुक्ति दिइन्छ । अब त्यो साँढे कस्ता हुन्छ भन्दा हुँहुँहुँ गरेर आउँछ । भखैर पदबहाली गरेको हुँहुँहुँ गरेर आउँछ । मन्त्रीसँग मेरो क्लाइमेक्स मिल्दैन रे । क्लाइमेक्स मिल्न त मैले जाँड खाने हुनुपर्छ । यहाँबाट म लण्डनको प्रोग्राममा गएँ । म जाँदै जाँदिन भन्दा जाउँ हजुर भने।
त्यहाँ त आफ्नो देशको बारेमा कुरा राख्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती गरेर लगे । त्यहाँ गएपछि मैले मेरो देशको लागि कोभिडबाट थला परेको देश, हस्पिटालिटीमा लागेका साथीहरुसहित विभिन्न साथीहरु, हाम्रो देश सेभ जोनमा छ भनेर सबैलाई आह्वान गर्ने इच्छा थियो । तर केही पनि छैन बोल्ने कार्यक्रम छैन ।’ आलेले अगाडि भने, ‘अब
यस्तो साँढेलाई सिईओ हामीले बनायौँ भने संस्था चल्छ ? सदस्यहरुले यस्तो गर्नुहुँदैन संस्था डुब्छ भन्दा ल तपाई आज धेरै रिसाउनुभयो, जाउँ हिँड्नुस् रक्सी खान भन्ने त्यस्तो साँढेलाई ल्याएर सीईओ बनाएपछि संस्था चल्छ ? म त दुःखका साथ भन्छु, लण्डनमा हुँदा कार्यक्रममा डेढ घण्टा म उभिएँ, सबैले स्याम्पेन खाइरहेका छन् । म नखाने मान्छे साइडमा उभिरहेँ । हाम्रो त्यो साँढेले पनि भटाभट
लगाइरहेको छ । आफ्नै आँखाले देखिरहेको छु, मलाई खा भन्छ । उसले पहिलाको मन्त्री जस्तो ठान्यो होला प्रेम आलेलाई । ४ वटा गाडी बेचेर प्रेम आलेलाई त्यो इमान म खरिद्छु भनेर, त्यसले सोच्यो होला त्यो सपनामा पनि नसोचे हुन्छ । इमान बेचेर म यो चियरमा बस्नेवाला छैन ।मन्त्री आलेले आफ्नो मन्त्रालय अन्तरगतका संघसंस्थाहरुमा विकृतिहरुको चाङ भएकोले सम्हाल्नै गाह्रो भइरहेको बताए ।
मन्त्री आलेले डब्लूटिएमको कार्यक्रममा जाँदा बोर्डबाट ८० लाख खर्च भएको भन्ने सुनेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न माग गरे । उनले सबै खाने खर्च आफूले व्यहोरेकाले खर्चको बारेमा छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री आलेले आफ्नो संस्थाप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न सबै कर्मचारीहरुलाई निर्देशनसमेत दिए ।